အပန်းဖြေ / လှုံ့ဆော်မှု - Geofumadas
အပန်းဖြေ / လှုံ့ဆော်မှု
Esri သည် Martin O'Malley ရေးသားသော Smarter Government Workbook ကိုထုတ်ဝေသည်
Esri သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော Smarter Government Workbook - Maryland အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း Martin O'Malley ၏ရလဒ်များကိုအုပ်ချုပ်မှုအတွက်အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ၁၄ ပတ်တာလမ်းညွှန်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ဤစာအုပ်သည်သူ၏ယခင်စာအုပ်ဖြစ်သည့်“ စမတ်အစိုးရ - သတင်းအချက်အလက်ခေတ်မှရလဒ်များအတွက်မည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည်နည်း” မှသင်ခန်းစာများကိုဖြေးညှင်းစွာသွားစေပြီး၊
ArcGIS-ESRI, ဘ‌‌လော့ခ်, Cartografia, အပန်းဖြေ / လှုံ့ဆော်မှု
ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသည်အချို့သောသူများသည်အခြေအနေကိုသိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ဗင်နီဇွဲလားသည်စကြာ ၀ ofာ၏ဗဟိုမဟုတ်သောကြောင့်အချို့သည်ပြောကြသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုပင်မသိသောသူများရှိသည်။ ငါ့ကိုဖတ်ပြီးအပြင်ကအခြေအနေကိုခံစားပြီးခံစားနေရတဲ့သူတော်တော်များများကသူတို့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိတယ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။
အပန်းဖြေ / လှုံ့ဆော်မှု, နိုင်ငံရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီ
ဗင်နီဇွဲလားကိုကိုလံဘီယာမှထွက်ခွာရန် - ကျွန်ုပ်၏ Odyssey
ကိုယ်ခန္ဓာကိုစိုးလ်မရှိဘဲခံစားဖူးပါသလား။ ငါမကြာသေးမီကခံစားခဲ့ရပါပြီ သက်ရှိသည်ရှူရှိုက်မိခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်သည်ဟုခံစားရသည့်စွမ်းရည်ရှိသောသတ္တဝါဖြစ်လာသည်။ နားလည်ရန်ခက်ခဲသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်၊ ထိုထက် ပို၍ ဝိညာဉ်ရေးအရငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပြည့်ဝ။ အပြုသဘောဆောင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်ဝါကြွားခြင်းမပြုမီကပင်…
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ပြီးဆုံးသွားပြီ။ ဂုဏ်ပြုရန်သင့်အနေဖြင့်ပျော်စရာအချိန်မလွန်သေးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားသတိပေးသည့်သမိုင်းဝင်ဓာတ်ပုံအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ LZ 2015 Hindenburg ဆိုသော Zeppelin အမျိုးအစားလေယာဉ်တင်သင်္ဘောသည် ၁၉၃၇ ခုနှစ်၊ မေလ ၆ ရက်၊ နယူးဂျာစီတွင်ဆင်းသက်စဉ်တွင်မီးလောင်ခဲ့သည်။ မတော်တဆမှုကြောင့် ၃၆ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
အင်ဂျင်နီယာ, တီထွင်မှု, အပန်းဖြေ / လှုံ့ဆော်မှု
မှတ်ပုံတင်ဌာန၏ပေါင်းစည်းရေးတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ - Cadastre
Cadastre နှင့်အိမ်ခြံမြေမှတ်ပုံတင်ကိုအတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးစနစ်များ၏ခေတ်မီရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြHisနာသည်များသောအားဖြင့်တူညီပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဟစ်စပန်းနစ်အခြေအနေထက်ကျော်လွန်သွားသည်။ တဖကျတှငျ ...
cadastre, အကြှနျုပျ၏ egeomates, အပန်းဖြေ / လှုံ့ဆော်မှု
Inspiration - GIS နည်းပညာနယ်ပယ်များ - ESRI UC ၏ပထမဆုံးနေ့
၂၀၀၅ ခုနှစ်သည် ESRI အသုံးပြုသူများညီလာခံသို့ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးတက်ရောက်ခဲ့သည့်နေရာ၊ တနေရာတည်း၌အမြဲတမ်းရှိနေသည်။ San Diego Convention Center၊ ရှည်လျားသောကြည်လင်သောဖန်စင်္ကြံ၏မုတ်များမှနဖူးစည်းစာတန်းကြီးများနှင့်ချိတ်ဆွဲထားသည်။ မုတ်ဆိတ်များနှင့်အဖြူရောင်အင်္ကျီများ၊ အာဖရိကတိုက်ရှိပြာများဖြင့်အပြုံးများဖြင့်အာရပ်သို့စီးသွားသည်။
ArcGIS-ESRI, geospatial - GIS, အပန်းဖြေ / လှုံ့ဆော်မှု
အခြေခံအဆောက်အဦများညီလာခံ 2014: အစွမ်းကုန်များအတွက် Inspiration
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ၂၀၁၄ အတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်ကို ထပ်မံ၍ လန်ဒန်တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး၎င်းတွင် Be Inspired ဆုကိုလည်းရရှိခဲ့သည်။ ဒီအခမ်းအနားဟာတခြားဖြစ်ရပ်တွေထက်ပိုပြီးစုစည်းနိုင်ခဲ့တယ်၊ သူတို့က iOS နဲ့ Android အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တဲ့ mobile application ကအကောင်းဆုံးပဲ၊ မွမ်းမံမှုများနှင့်အတူ ...
Bentley Systems က ငါ-မော်ဒယ်
Microstation-Bentley, အပန်းဖြေ / လှုံ့ဆော်မှု
UPSOCL - လှုံ့ဆော်မှုအတွက်နေရာ
၎င်း၏ interface သည်ရိုးရှင်းပြီးဘေးဘားများ၊ ကြော်ငြာများမရှိ၊ ရှာဖွေရေးပုံစံတစ်ခုနှင့်အမျိုးအစားငါးခုပါသည့်မမြင်ရသောမီနူးမျှသာဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာကမ္ဘာကြီးအတွက်အရေးကြီးသောအရာများကိုမျှဝေရန်ရည်ရွယ်သောစပိန်စကားပြော UPSOCL ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ လှုံ့ဆော်ပေးသောအရာများ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အရာများနှင့်မြင်သင့်သောအရာများ။ င်း…
အင်တာနက်နှင့်ဘလော့များ, အပန်းဖြေ / လှုံ့ဆော်မှု
စစ်တမ်းတစ်ခုအဖွဲ့သည်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်.5အကြံပြုချက်များ
ဒါဟာထိုအချိန်ကသူဌေးတွေစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ခက်ခဲရှိ၏ ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်ခိုးမှု၊ ပျက်စီးမှုနှင့်မတော်တဆမှုများမှအာမခံထားရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပထမဥပမာအနေနှင့်နားလည်နိုင်သည်။ ဥပမာ - အကယ်၍ ပစ္စည်းကိရိယာများကိုနောက်ပိုင်းတွင်မြှို့နယ်သို့လှူဒါန်းမည်ဆိုပါက၎င်းတို့အတွက်အာမခံအတွက်ပေးရသည်ကဘာကြောင့်ပိုကောင်းသနည်း။ ခိုးတာလား ဒီဟာကသင့်ကိုအခွင့်အရေးမပေးပါဘူး
ဂျီပီအက်စ် / ပစ္စည်း, အပန်းဖြေ / လှုံ့ဆော်မှု, topografia
ကျွန်တော့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံနောက်ဆုံးစာတစ်စောင်နီးပါး ... ကျွန်တော်မထွက်ခွာခဲ့ပါဘူး
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက်ကပဲမင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲငါဟာခုနစ်နှစ်ကြာအလုပ်များခဲ့ပြီးမှုတ်သွင်းခံခဲ့ရတဲ့ပရောဂျက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုလက်မှတ်မထိုးတော့ဘူး။ သေချာတာပေါ့၊ သူတို့ဟာရှင်းပြချက်ကိုစောင့်နေခဲ့မှာပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အလွန်နီးကပ်တဲ့လူနှစ်ယောက်ကသာသူတို့အကြောင်းကိုရက်အနည်းငယ်အကြာမှာသိခဲ့ပေမယ့်ငါဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့နေ့ကစပြီးစီစဉ်ထားတယ်။
cadastre အကြှနျုပျ၏ egeomates
အခြေအနေကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လွမ်းဆွတ်မှုကိုစတင်ကုတ်ခြစ်ရာမှစတင်သောအခါ ... ငါလမ်းညွှန်တစ် ဦး ထံမှတွေ့ခဲ့သမျှသောအကောင်းဆုံးနှုတ်ဆက်စကားတစ်ခုကိုမျှဝေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အထွေထွေနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှုတ်ဆက်အီးမေးလ်တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းကဲ့သို့သောခံစားမှုမျိုးမရှိခဲ့ပါက (သင်ဟာအခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည်) ငါပြောမယ်၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက်၊ ၀၉:၃၀ ဖြစ်ခြင်း၊
တပြည်လုံးကိုငါအဘို့အ Google Earth ကနေပုံရိပ်တွေကိုအသုံးပြုဖို့နိုင်သလား?
ယနေ့ခေတ်ဒတ်ခ်ျမိတ်ဆွေတစ် ဦး နှင့်ကောင်းသောအချိန်ရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်သည်ကင်ဆာသည်လက်တွေ့စိတ်ပညာနှင့်ဂူဂဲလ်ကမ္ဘာ၏မှားယွင်းသောအဆုံးသတ်မှုတွင် ဦး ဆောင်သောလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်တူညီမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ အဆင့် ၁: ခြိမ်းခြောက်မှု။ ပိုင်ရှင်တစ် ဦး ထံမှတိုင်းတာခြင်းတောင်းဆိုချက်ကိုတုန့်ပြန်သောအနေဖြင့်နည်းပညာရှင်တစ် ဦး သည်လယ်သို့သွားသည်။
cadastre, Google Earth / Maps ကို, အပန်းဖြေ / လှုံ့ဆော်မှု
VBookz, အိုင်ပက် / iPhone / iPod ကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးအသံစာဖတ်သူကို
စာဖတ်ခြင်းနှင့်အသံကျယ်သည့်အပလီကေးရှင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့စာအုပ်များနှစ်သက်ပုံကိုပြောင်းလဲစေမည်မှာသေချာသည်။ အထူးသဖြင့်၊ မီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်ဘေးထွက်မှတ်စုများကိုမှန်ကန်သောစာအုပ်ဖြင့်အရသာရှိခြင်း၊ ကောင်းသောစကားပြေကိုဖြည်းညှင်းစွာဖတ်ခြင်း၊ သို့သော်ခရီးစဉ်တစ်ခုသို့သွားရန်ကျွန်ုပ်အတွက်ဘယ်တော့မျှမဖြစ်နိုင်ပါ။
egeomates ၏သမိုင်းအတွက်4အရေးကြီးသောအချိန်လေး
- ငါတို့မှာဘလော့တစ်ခုရှိသင့်တယ် ... ငါ့ရဲ့သူဌေး (HM) ကသူ့မျက်လုံးတွေကိုဒီကမ္ဘာကနေဖယ်ထားတယ်။ အသက် ၇၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ခေါင်းမာတဲ့တိုင်ကြားချက်ကိုသူတို့ရဲ့ Cadastral ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုလုပ်ဆောင်နေတဲ့မြူနီစီပယ်တွေနဲ့အင်တာနက်ကိုဘာကြောင့်ဆက်သွယ်ပေးခဲ့တာလဲဆိုတာကိုမသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ပြောတာထက်ပိုပြီး ...
အကြှနျုပျ၏ egeomates, အပန်းဖြေ / လှုံ့ဆော်မှု
ဂွာတီမာလာမှာရှိနေတဲ့ငါ့ရဲ့အထီးကျန်ညကပြန်ဖြစ်လာပြီ၊ အခုငါအဲဒီကိုသွားတော့မယ်ဆိုတော့သင်ကိုယ်တိုင်ဖျော်ဖြေဖို့တစ်ခုခုကျန်ခဲ့ပြီ။ ငါသိတယ်၊ ဒါကစွဲလမ်းမှုကိုနည်းပညာနဲ့မဖြည့်ဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲဒါတည်ရှိနေတယ်။ သူမသည်မျက်လုံးအမည်းရောင်နှင့်ပခုံးအရှည်ဖြောင့်သောဆံပင်ရှိသောချစ်စရာမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးဘော်ဒါကျောင်းဝန်ထမ်းများ၏အခွင့်ထူးခံဆွေမျိုးများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ယခုအပတ်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်စကားပြောခဲ့သည်။ ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်များကယူခဲ့သည့်မီးခိုးရောင်ဆံပင်နှင့်ပတ်သက်သည့်သမိုင်းကြောင်းအချို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူ၏ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနေရာကိုထောက်ပံ့ပေးသောအရာထက် ပို၍ သတ္တုတွင်းဖြစ်သည်။ ငါ့အာရုံပျံ့လွင့်စရာများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကြောင့်အနုပညာနယ်ပယ်မှအင်ဂျင်နီယာသို့မည်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုငါရှင်းပြခဲ့သည်။
CAD / GIS ဆုံးမဩဝါဒပေး, အပန်းဖြေ / လှုံ့ဆော်မှု
ငါမြို့မှာငါတို့ပျော်မွေ့ဆက်သွယ်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်အကန့်အသတ်ရှိရာသေးငယ်တဲ့မြို့မှာအသက်ရှင်နေထိုင်သွားခဲ့ပါလျှင်ငါအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအမြဲတွေးမိ။ ယခုအချိန်တွင်အင်တာနက်နှင့်ဆက်သွယ်လာသည့်အပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုများသည်အီးမေးလ်အသစ်များ၊ လူမှုရေးကွန်ယက်များမှသတင်းများကိုအလွန်သတိပြုမိစေသည်။
အပန်းဖြေ / လှုံ့ဆော်မှု, ခရီးသွား
ဒီနွေရာသီအားလပ်ရက်ခရီးဟာစိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရုံထက်မကပါ။ ငါ့အတွက်သာမကပဲငါနှင့်အတူလိုက်ပါလာခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်၏ကျန်မိသားစုအတွက်လည်းဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံချည်ချိတ်ဆက်ထားသောနှိုင်းယှဉ်ချက်သည်အလွန်တကယ့်ဖြစ်ဟန်ရှိသည် ဖြစ်၍ ရောင်ပြန်ဟပ်ရန်အချိန်ယူရသည်။ နွေရာသီအပူ ...
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2စာမျက်နှာ3... စာမျက်နှာ7နောက်စာမျက်နှာ